Mampavitrika ny safidin'ny mpamorona amin'ny terminal Android | Androidsis
Ahoana ny fomba hampiasana ny safidin'ny mpamorona amin'ny Android
Ny iray amin'ireo zavatra ampiharina ho fenitra ao amin'ny Rafitra fandidiana Android, dia fidirana amin'ny menio fanovana manokana ho an'ny mpamorona na fantatra kokoa amin'ny hoe safidy ho an'ny mpamorona, izay ahafahantsika mampihetsika safidy manan-danja toy ny Famafana USB.
Ny zava-misy fa ampiharina ho fenitra dia tsy midika hoe azo idirana izy io raha vao jerena ho an'ny mpampiasa rehetra. Izany no antony hanazavana amin'ny lahatsoratra manaraka ny fomba hampiasana ireo safidy ireo ao amin'ny menio napetrakao ka ahafahanay misy azy ireo amin'ny alàlan'ny fikirakiranay manokana Smartphone Android na Tablet.
1 Inona no azontsika idirana amin'ny menio safidin'ny developer?
2 Ahoana ny fomba hampiasana ny lisitry ny safidy fampandrosoana?
Inona no azontsika idirana amin'ny menio safidin'ny developer?
Avy amin'ity menio miafina ity izay ahafahantsika mampihetsika amin'ny fomba tena tsotra dia afaka miditra amin'ny safidy manokana isika Android developer. Safidy manan-danja toy ny alefaso ny debugging USB, arovy ny fitehirizana USB, tazomy ny efijery, avelao ny toerana namboarina, misafidiana fampiharana ho an'ny debugging, asehoy ny fikasihana ataontsika eo amin'ny efijery na ny toerana misy ny mpanondro na hanova ny hafainganan'ny hafainganam-pandehan'ireo sary mihetsika aza.
Avy amin'ity menio ity, raha hiresaka ho an'ireo mpampiasa Android vao vao afaka mamela ny voalaza etsy aloha isika Famafana USB izay fepetra takiana ilaina ohatra mba hahafahana manatratra MAMAKA amin'ny ankamaroan'ny terminal Android ankehitriny.
Ahoana ny fomba hampiasana ny lisitry ny safidy fampandrosoana?
Mba hampavitrika ny menio safidy fampandrosoana u safidy mialoha, tsy mila mandeha any amin'ny menio fikirana ao amin'ny terminal fotsiny isika ary eo amin'ny farany ambany amin'ilay toerana lazainy Momba ny fitaovana, Momba ny Tablet, momba ny telefaona na safidy mitovy amin'izany arakaraka ny maodelin'ny terminal, midina mankany amin'ilay safidy antsoina manangana isa ary tsindrio impito misesy eo amboniny. Raha mandeha ho azy isika raha miverina amin'ny efijery lehibe an'ny menio fanovana momba ilay fitaovana voalaza, dia afaka mahita ity safidy vaovao antsoina hoe ity isika safidy ho an'ny mpamorona, Safidy fampandrosoana na Safidy mandroso mihitsy aza.
Na dia maro aminareo aza no mino noho ny fahatsorany fa tsy ilaina ity lahatsoratra ity raha mila fanazavana, dia nanapa-kevitra ny hanoratra azy aho noho ny fangatahana marobe tonga taminay tamin'ny alàlan'ny fahasamihafana. Tambajotra sosialy Androidsis anontaniany aminay ny fomba hanatanterahana izany.
Fanazavana fanampiny - Ny installer Cyanogenmod dia azo alaina izao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hampiasana ny safidin'ny mpamorona amin'ny Android
ary avy eo ny fomba hanafenana ny ociones an'ny mpamorona ao amin'ny tablet samsung galaxy 2 indray
velabrothers@gmail.com dia hoy izy:
Misaotra betsaka, fanampiana be tokoa io!
Mamaly an'i velabrothers@gmail.com
Salama, manana boky torolalana maro aho fa manana Samsung Galaxy Young, ary rehefa mandeha amin'ny nomeraon-tsoratra aho dia tsindrio eo, tsy misy na inona na inona mitranga, nomeko imbetsaka izany, misy olona afaka manome famantarana ahy
Ity iray ity dia efa nivoaka, ny fanomezana switch ahafahana manisy marika azy ireo ...
Efa nataoko ao anaty roya volomboasako ilay izy ary na izany aza tsy mamela ahy ilay USB falifaly hametraka ny mozika amin'ny solosaina na sary na zavatra hafa ary efa vitako ny zava-drehetra, misy manampy ahy
Alejandra Franchini dia hoy izy:
salama ny findaiko fa tsy mihetsika foana ary tsy nampihetsika ny safidin'ny mpamorona velively. Ahoana no ahafahako mametraka rom hafa aminy?
Valiny tamin'i Alejandra Franchini